R.W Ku xigeenka oo la kulmay Safiirka China. – SBC
R.W Ku xigeenka oo la kulmay Safiirka China.
Posted by SBC Editor on Agoosto 20, 2017 Comments
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khader) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka dalka China u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr Qin Jain,waxayn ka wada hadlayn habkii loo abuuri lahaa iskaashi caalami ah oo dhexmara China iyo Soomaaliya, iyo sidii labada wadan uga wada shaqeyn lahaayeen dhanka maalagashiga iyo Ganacsiga.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay in uu ku farxsan yahay booqashada Safiirka dalka China, sidoo kalena waxuu u mahad celiyay muwaadaniinta u dhashay dalka China, kuwaa soo dalxiis ku yimi Soomaaliya, si ay u arkaan quruxda iyo bilicdda dhulka Soomaaliyeed, isagoona taas ku macneeyay in dalka Soomaaliya uu hormuud u yahay wadamadda loo soo dalxiis tago ee qaaradda Africa.
“China iyo Soomaaliya waa labo dal oo xariir dheer leh si wanaagsana u wada macaamila, waxyna iska kaasahan doonaan dhanka ganacsiga iyo maalgashiga maadaama ay Soomaaliya markale ku soo laabatay saaxadda aduunka’ ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya.
Safiirka dalka China Mr Qin Jain ayaa tilmaamay in wadankiisu uu diyaar u yahay in Soomaaliyada cusub ay ka caawiyaan dhanka difaaaca iyo la dagaalanka argagixisada, si bulshada Soomaaliyeed ay u helaan amni, dawladuna ay si buuxda u maamusho amaanka dalka.
Dhanka kale Ra’iisul Wasare ku xigeenka Soomaaliya oo uu waheliya Wasiir dawlaha xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Cabdullaahi Camuud ayaa qalab xafiis ka gudoomay Safiiirka dalka China,waxaana loogu tala galay in lagu dardargaliyo shaqooyinka xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.